Talyaaniga oo ku biiraya France & Beljim ololaha indho shareerka mamnuuca Yurub – SBC
Talyaaniga oo ku biiraya France & Beljim ololaha indho shareerka mamnuuca Yurub
Dalka Talyaaniga ayaa la filayaa in uu noqdo wadanka sadexaad ee ka mid ah Midowha Yurub oo mamnuuca indho shareerka hablaha dumuarka Islaamka ay wajiga ku xirtaan,iyadoo wadankaasi uu ku biirayo wadamada Faransiiska & Belgium oo horey u mamnuucay indho shareerka.
Baarlamaanka wadanka Talyaaniga ayaa maanta shaaca ka qaaday in uu ka doodi doono talaabada mamnuucista niqaamka marka laga soo laabto fasaxa xagaaga.
Dalalka France & Belgium ayaa iyagu uga mamnuucay goobaha loo dhan yahay ee la isagu yimaado waxaana talaabada in Talyaaniga laga mamnuuco indho shareerka taageerey Isbahaysiga midig dhexe ee awooda wadanka Talyaaniga haya ee uu Ra’isalwasaaraha ka yahay Silvio Berlusconi.
Gudiga arimaha dastuurka ee baarlamanka Talyaaniga ayaa sheegay in mooshinkan oo ay soo gudbiyeen ururka waqooyiga Talyaaniga ee sida ba’an uga soo horjeeda dadka soo galootiga ah in laga doodi doono bisha September.
Berlusconi wuxuu ku leeyahay awood badan golayaasha hoose & kan sare ee Baarlamanka Talyaaniga waxaana la filayaa in in mamnuucistu ay meel marto marka ay timaado codeynta ugu dambeysa.
Faransiisku waxay ku dhaqaaqeen mamnuucista horaantii sanadkan waxaana xiligaasi ka dka dib Al-Qaacida ay wacad ku martey in ay Faransiiska la beegsan doonto weeraro iyadoo uga aargudanaysa mamnuucista indho shareerka.
Talyaaniga waxaa ku nool 1 milyan oo Muslimiin ah waxaase ah dhif & naadir in la arko haweenay xiran indho shareer.
Gudigan ka tirsan Baarlamanka Talyaaniga ee go’aankan isku raacay waxay sheegeen in ay bisha September Baarlamanku uu arinkan ka doodi doono, waxaase ay sheegeen in ay iyagu isku raaceen dhaqan galinta go’aankan mamnuucista.
Go’aankan wuxuu dhigayaa in qofkii ku xadgudba mamnuucista burqada & niqaabka lagu xukumo 12 bilood oo xariga ah & waliba ganaax lacageed oo gaaraya 30 kun oo Euro oo u dhiganta 42 kun oo doolarka Mareykanka.
Sidoo kale waxaa mamnuucistan qayb ka ah in qof kasta oo baabuur wada aanu qaadan wax la xiriira calaamo madaxa ah oo diimeed sida koofiyado, iyadoo aan si toos ah loo magacaabin wax diin ah.
Talaabada in laga mamnuuco Talyaaniga indho shareerka waxaa si weyn ugu olalaynaysay haweenay asalkeedu ahaa Muslim oo ka soo jeeda Mororco oo lagu magacaabo Souad Sbai, haweenaydaasi oo ka tirsan xisbiga Ra’isalwasaare Silvio Berlusconi ee lagu magacaabo ling People of Freedom Party (PDL).